‘डिभोर्स’का कारण अवाेध बालबालिकाहरु सहित ९ जनाको हत्या गरेर ज्वाइँले गरे आत्महत्या ! — Chetana Online
‘डिभोर्स’का कारण अवाेध बालबालिकाहरु सहित ९ जनाको हत्या गरेर ज्वाइँले गरे आत्महत्या !
धरान : पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ मा आइतबार राति एउटै परिवारका नौ जनाको हत्या भए लगत्तै मानबहादुर माखिम लिम्बुले आत्महत्या गरेका छन्।
श्रीमती मनकुमारी फियाकसहित ९ जनाको हत्या लगत्तै मानबहादुरको शव झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको हो। परिवारमा बेमेल भए पश्चात श्रीमती मनकुमारी फियाकले मानबहादुरलाई छाडेर माइतीघरमा बस्दै आएकी थिइन्।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका मानबहादुर धनराज शेर्माका साढुभाइ र बमबहादुर फियाकका ज्वाइँ पर्ने व्यक्ति हुन् । एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘मानबहादुरको श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो रहेनछ । श्रीमती माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । उनले धनराज र बमबहादुरको परिवारले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिन उचालेको आरोप लगाउँदै आएका रहेछन् । त्यही झोँकमा उनले सबैको हत्या गरेका हुनसक्छन् ।’’ प्रहरीका विभिन्न निकायले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
मानबहादुर भने मिक्लाजुङ ७ को घरमा एक्लै बस्दै आएका थिए। श्रीमतीले छाडेपछि उनी मानसिक रुपमा विज्ञिप्त बनेका थिए। श्रीमतीसहित नौ जनाको हत्यालगत्तै उनले आत्महत्या गरेपछि प्रहरीले परिवारको हत्यामा उनकै संलग्नता रहेको आशंका गरेको छ। अनुसन्धान उनीतर्फ मोडिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ।
‘बच्न सफल बालिकाको भनाइ र उनको आत्महत्याले हत्यामा उनको संलग्नता रहेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ’, अनुसन्धानमा सक्रिय एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
गएराति सुरुमा बमकुमार फियाक लिम्बुको घरमा घटना घटेको देखिन्छ। सबै सुतिरहेका बेला मखुण्डो लगाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्द हतियार प्रयोग गरेको प्रहरीले बताएको छ। बमकुमार फियाक आत्महत्या गर्ने मानबहादुरका ससुरा हुन्।
घटनाबाट बच्न सफल १२ वर्षीया सीता खजुमले एकजना मखुण्डो लगाएको व्यक्तिले सबैको हत्या गरेको बताएकी छन्। ‘मध्यरातमा अनुहारमा मखुण्डो लगाएको व्यक्तिले सबैलाई खुकुरी हानेको हो ’, बालिकालाई उद्धृत गर्दै एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘म भाँगेर बच्न सकेँ।’
सुरुमा आत्महत्या गर्ने मानबहादुरका ससुरा, सासु, श्रीमतीसहित पाँच जनाको हत्या भएको देखिन्छ। त्यही घरबाट १२ वर्षीय सीता खजुम भने भाग्न सफल भएकी हुन्।
प्रहरीका अनुसार सुरुमा पाँच जनाको हत्यापछि आत्महत्या गर्ने मानबहादुरकै साढुदाइ धनराज शेर्माको परिवारका चार जनाको हत्या भएको छ। त्यहाँ मानबहादुरका साडुदाइ धनराज र उनकी श्रीमती जसिता, छोरीहरु इक्सा शेर्मा र मुना शेर्माको हत्या भएको छ। धनराज पाँच महिना अगाडि मेलेसियाबाट घर फर्किएका थिए।
घटनाको अनुसन्धानका लागि अहिले प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी केदार रिजाल र संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख एसएसपी शरद खत्री घटनास्थलतर्फ गएका छन्। घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै रिजाल र खत्री आफै घटनास्थलतर्फ हिँडेका हुन्।
नौ जनाको हत्या लगत्तै मानबहादुरले झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि प्रहरी अनुसन्धान उनीतर्फ केन्द्रित भएको हो। यद्यपि एउटै व्यक्तिले ९ जनाको हत्या कसरी गरे भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धानपछि मात्र बोल्न सक्ने एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका –३ आरुबोटमा बमकुमार फियाक (लिम्बु) र उनका ज्वाइँ धनराज शेर्माका परिवारको हत्या भएको प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार पौडलको भनाइ छ।
एक घन्टामा १५ सयवटा छाप्ने सक्ने स्मार्ट लाइसेन्सको मास प्रिन्टर आयो
लालबाबु पण्डित भन्छन् : अब चाप्लुसी गर्ने कर्मचारीका दिन गए
रोल्पाली समाज दाङका अध्यक्ष मदन ओलीलाई पितृशोक
नेकपा दाङमा पार्टी एकताले पूर्णता पायो, बन्यो सात सदस्यीय कार्यालय
विभागिय मन्त्रीहरुलाई सभामुखले भने- मल र इन्धनको अभाव हुन नदिनुहोस्
भारतीय क्रिकेटको कप्तानीबाट विराट कोहली ‘आउट’ हुनसक्ने
बारबर्दियामा सहिद बिष्णु–धनि बहुप्राबिधिक शिक्षालय सञ्चालन हुने